Andrianiko ny teniko – Miichelle's Life
17 juin 2016 16 juin 2016 Miichelle's Life
Anio aho dia hiresadresaka fotsiny fa tsy hanao lahatsoratra mikasika ny lamaody na ny lasa ny saiko, inona moa izany no hilazana ny « maquillage » amin’ny teny gasy, « makiazy » ?? aleo atao hoe makiazy e! Hahaa.
Hiresadresaka indrindra ny teny malagasy, satria ity volana jona ity dia iray volan’ny teny malagasy. Koa satria Gasy aho, dia rariny angamba raha hanao lahatsoratra amin’ny teny malagasy. Ezahako hatao teny malagasy ranoray ity lahatsoratra ity, na dia manano sarotra kely aza satria mibahana loatra ny firesaka mifangaro teny vahiny na ilay hoe « vary amin’ny anana » rehefa miteny. Hany ka misy voambolana sarotra ny mandika azy amin’ny teny malagasy mila mieritreritra tsara vao mahadika azy, mila rakibolana fandikan-teny mihitsy aza moa 😀. Ary indrindra, enga anie tsy hisy diso tsipelina, ialako tsiny sahady raha misy izany.
Sary: Minouah (All rights reserved)
Mibahana loatra eo amin’ny fitenin-tsika andavan’andro ny fiteny hafa indrindra fa ny fiteny frantsay hany ka lasa very sy zary mihen-danja ny antsika. Eto Madagasikara isika nefa toa ny tenim-pirenen’ny hafa no mibahana, ataoko isika satria tafiditra ao anatin’izany ny tenako tsy maintsy misy voambolana amin’ny teny hafa foana tsinona rehefa miteny. Toa lasa fisehosehoana ilay miteny amin’ny fiteny hafa eto amintsika. Gasy ray, Gasy reny ary monina eto nefa dia tsy miteny gasy rehefa ao an-trano fa mbola fiteny hafa ihany no ifampiresahana.
Ahoana no tsy hahavery lanja ny antsika amin’izany? Isika aza tsy mampiasa azy sy tsy tia azy.
Rehefa any ivelany indray dia misy ireo manadino tanteraka ilay teny gasy na mody manadino, misy aza moa ireo tsy mahay mihitsy. Mahamenatra ary ve ny tenin-drazantsika? Lasa ny saiko. Nefa ireo vahiny monina eto amintsika dia sady mahay ny fitenintsika no tsy ataony latsa-danja ny azy, tsy adinon’ny ray aman-dreniny ny mampianatra azy ny fitenin-drazany ka mahay avokoa ireo taranaka aty aoriana. Misy ihany ireo, izay any ivelany, mahavita mampianatra ny zanany teny malagasy , eny fa na dia ao an-trano fotsiny aza, hiderana azy ireo izany.
Sary: Johary Ramangalahy (All rights reserved)
Ny antsika eto an-toerana dia sady disoina ilay teny no ampidirana litera tsy ao anaty abidy efa naika nanoratra alfabeta ary aho, hahaha. Indrindra moa ireo izay zatra mampiasa finday ka manao irony fanafohezan-teny amin’ny hafatra fohy irony anisan’ireny aho taloha, ary efa ho taona maromaro izao aho no miezaka manarina izany. Hitako lasa niha-votsa ny saiko fony nampiasa ireny, diso avokoa ny zavatra soratako, tsy nahatoky tena intsony aho rehefa manoratra fa misalasala lava hoe marina ary ve ity? Izay no nanapahako hevitra tsy hampiasa ireny raha mbola azo atao.
Ahoana izany ny hoavin’ny tenin-drazantsika? Isika tompony aza tsy tia sy tsy mapiasa ny antsika, iza no andrasantsika hitia sy hampiasa azy?
Io no antsika, io no maha Malagasy antsika, koa nahoana isika raha mba samy miezaka mampiasa izany arak’izay azo atao sy araka ny tokony ho izy? Raha izao zava-misy izao dia tsy hisy hahay hanoratra sy hiteny gasy intsony isika, indrindra ireo taranaka any aoriana. Ho very ilay soatoavina Malagasy, ho very ny maha-Malagasy antsika.
Ny fifehezana ny teny gasy ara-dalàna akory tsy manakana antsika velively hivelatra amin’ireo tenim-pirenena hafa. Tsapa fa ilaina ny mahafehy tenim-pirenena maro hafa amin’izao vanin’andro iainatsika izao.
Ahafahana mivelatra kokoa izany ary ahafahana mifandray amin’ny olona maro hafa tsy mitovy fihaviana amintsika. Izay ilay hoe « Andrianiko ny teniko, ny an’ny hafa feheziko » Isika tompony indray no mihafahafa amin’ny tenintsika. Andao samy hiezaka hanova izany fa harenantsika io.
Izay sy izay ary aloha ny anio e, tsy mihambo mahavita sy mahay aho akory fa mba miezaka mitondra izay azoko entina sy manao izay vitako amin’ity iray volan’ny teny malagasy ity.
Samia ary isika rehetra misaintsaina sy mandinika izay azo raisina.
Dia samia tsara daholo.
Ny sary rehetra dia tsy azo adika/Toutes les photos sont interdites de copie.
Gasy Malagasy Volan'ny teny malagasy
Article précédent [TAG] La chanson qui … ?
Article suivant Revue et Swatches des Ultra Matte Lip de Colourpop
2 réflexions au sujet de « Andrianiko ny teniko »
Tiako be ity lahatsoratra ity marina. Izaho koa manko anisan’ireo mankafy ny teny malagasy. Izaho aza t@ afaka bacc dia saika hianatra malagasy teny ankatso fa bedin’i Dadanay hoe tsy hitondra mankaiza hono 😞, tokony nianarako foana ihany fa ohatran’ny afaka natao hoe nianatra taranja roa fa izaho koa no tsy nahasahy namaly olon-dehibe.
Tena marina daholo izay voalazandry, tsy hita ho ampiana.
Mankasitraka e! Maromaroa ny tanora malagasy toa antsika dia ho velona ny tenintsika.
Hihii. Tsara ny teny malagasy akia. Adala izay tsy tia ny azy. Afaka natao mihitsy saingy isika tsy nahasahy namaly, ny ahy koa ohatr’izany fa filôzofia no tiako dia io mihitsy no valiny azoko.
Maromaroa ny toa antsika izany dia ho ela velona ny tenintsika.
Mirary soa akia 😘😘